किरा परोस् नारा नकारात्मक छः अख्तियार सचिव भगवतीकुमार काफ्ले
Thursday, 22 September 2011 10:22	नागरिक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकार छ। झन्डै दुई वर्षदेखि आयोगका प्रमुख आयुक्तको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव भगवतीकुमार काफ्ले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अधिकारकर्मीझैं मैदानमा ओर्लिएका छन्। उनको काम भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नु हो कि सडकमा नाराबाजी गर्नु? नागरिकका किरण भण्डारीले गरेको कुराकानी :
विश्वकपमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ : पुबुदु दासानायाके, क्रिकेट प्रशिक्षक
Monday, 19 September 2011 11:39	नागरिक
श्रीलंका र क्यानाडाका पूर्व क्रिकेटर पुबुदु दासानायाके नेपालको प्रशिक्षक बन्न अर्को हप्ता काठमाडौं आउँदै छन्। क्यानाडालाई २०११ को विश्वकपमा छनोट गराएका ४१ वर्षे दासानायाकेलाई नेपाली क्रिकेटलाई अफ उचाईंमा पुर्‍याउने उद्देश्य बनाई नेपाल क्रिकेट संघको भदौ ६ बसेको वार्षिक बैठकले नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही विषयमा क्यानाडामा रहेका दासानायाकेसँग नागरिकका लागि विनोद पाण्डे र नवीन खतिवडाले आइतबार गरेको टेलिफोन कुराकानीको सारसंक्षेप।
अनुगमन रोकिन्न : लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्रजिअ, काठमाडौँ
Thursday, 15 September 2011 11:30	नागरिक
अनुगमन एकाएक तीव्र भयो त?
चाडबाडमा उपभोक्ता बढी ठगिने भएकाले यही समय ठिक ठान्यौं। एउटालाई कारबाही गरेर सयौं, हजारौंलाई सुधार्ने बेला यही हो।
भदौदेखि कात्तिकसम्मको तीनमहिने कार्ययोजना बनाएका छौं। खाद्य, औषधि, मासु, मूल्य र नापतौलका पाँच उपसमिति गठन गरेका छौं। हरेक दिन एउटा उपसमिति बजारमा निस्कन्छ।
म अल्पमतमा परेँ : वैद्य
Sunday, 11 September 2011 11:15	नागरिक
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग नागरिकका किरण भण्डारीले लिएको अन्तर्वार्ता
सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम कस्तो छ?
-कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भनेर पार्टीमा सल्लाह भएको होइन। समग्रमा ठिकै। कतिपय बुँदा अमूर्त र अपुरो छ। धेरै टीकाटिप्पणी नगरौं।
सरकारले पूर्णता नपाएकाले कार्यक्रम अपुरो भएको हो कि? तपाईंको पक्ष कहिले सरकारमा जान्छ?
-सरकारले पूर्णता पाउने भनेको हाम्रो विचार समूहको प्रवेशमात्र होइन। कांग्रेस, एमाले र अरू दललाई समेत ल्याउने हो।
केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्र पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैअनुसार असोज १ गतेलाई बैठक पनि डाकिएको थियो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघको बैठकमा जानुपर्ने भएपछि फेरि सर्‍यो। केन्द्रीयमा छलफल नभई सरकारले पूर्णता पाउँदैन।
ट्रेड युनियन जिम्मेवार भएनन्: सूर्य नेपाल कर्पोरेट उपाध्यक्ष
Sunday, 04 September 2011 10:34	नागरिक
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले मजदुर विवादका कारण तीस करोड लगानीको तयारी पोसाक उद्योग बन्द गर्‍र्यो। माओवादी शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा आएपछि बढी रोजगारी दिने उदेश्यले सूर्य नेपालले गार्मेन्ट उद्योग स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। आर्थिक, सामाजिक र रोजगारीको अभावका कारण द्धन्द्ध बढेको निर्ष्कष निकाल्दै यो उद्योग स्थापना गरेको थियो। द्धन्द्ध समाधानको लागि योगदान दिन चुनौतिपूर्ण अवस्थामा स्थापना भएको उद्योग राजनीतिक कारणले सदाका लागि बन्द हुन पुगेको छ।
पिएचडी गर्ने योजना छ : मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ
Wednesday, 24 August 2011 11:20	नागरिक
१. एक हप्तापछि मिस नेपालको ताज नयाँ युवतीलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ?
सँधै एउटैले कब्जा गर्ने हो भने नयाँले कहिले ठाउँ पाउने? आगामी दिनमा पनि नयाँ मिस नेपालसँग काम गर्ने इच्छा छ।